Hanao lalàna manohitra ny pelaka ve i Trinidad sy Tobago amin'ity fahavaratra ity?
Home » Vaovao momba ny zon'olombelona » Hanao lalàna manohitra ny pelaka ve i Trinidad sy Tobago amin'ity fahavaratra ity?
Ny lalàna any Trinidad sy Tobago dia mety handrara tsy ho ela ny fanaovana firaisana ara-nofo pelaka aorian'ny didin'ny fitsarana ny 13 aprily tamin'ity taona ity. Ny mpitsara Devindra Rampersad dia nilaza fa ny ampahan'ny lalàna momba ny fanitsakitsaham-bady, izay mandrara ny “buggery” sy ny “fahalotoam-pitondran-tena” eo amin'ny lehilahy roa, dia nanao heloka bevava tamin'ny firaisana ara-nofo teo amin'ny olon-dehibe ary tsy mifanaraka amin'ny lalàm-panorenana.
Amin'ity fahavaratra amin'ny volana Jolay ity dia andrasana ny didim-pitsarana farany momba ny fiatrehana ny sombin'ilay hetsika, ary raha mandeha araka ny anton'ireo antokon'olona LGBT izy ireo, tsy ho ela dia afaka mandray an-tanana ireo mpandeha maro kokoa miaraka amin'ny sandry malalaka i Trinidad sy Tobago . Azo antoka fa hampisondrotra ny fizahan-tany any amin'ireo nosy sy hanatsara ny toekarena izany.
Ny raharaha dia natolotry Jason Jones, mpikatroka LGBT tamin'ny taona 2017, teraka tao T&T nefa monina any Grande-Bretagne. Tamin'ny fampielezan-kevitra an-tserasera dia nilaza izy fa te-hihantsy ny lalàna nolovaina tamin'ny fotoana nanjakan'ny Anglisy.
Nanjary repoblika i Trinidad sy Tobago tamin'ny 1976. Tamin'ny taon-dasa, izy io dia iray amin'ireo firenena 5 izay nanitsy ny lalàny handrarana ny fanambadian'ny zaza. Saingy tsy misy lalàna miaro ny olona LGBT, ary ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona dia milaza fa maro ny olona LGBT matahotra ny hisokatra amin'ny heviny na ny firosoany. Ny fanamelohana azy ho mpanao buggery dia mitondra sazy 25 taona an-tranomaizina, araka ny lalàna.
Colin Robinson, talen'ny Coalition Advocating ho fampidirana ny firaisana ara-nofo dia nampitandrina fa mbola lavitra ny lalana. "Tsy te-ho taitaitra aho, fa manantena aho fa handany fotoana ny hanaiky ny olona, ​​ary antenaina fa kely dia kely ny herisetra," hoy izy tamin'ny Thomson Reuters Foundation tamin'ny alàlan'ny finday avy tany Trinidad sy Tobago.
Ilay vondrona, izay miasa ho an'ny fahamarinana momba ny lahy sy ny vavy sy ny lahy sy ny vavy, dia nilaza fa antenaina fa hampiakatra fitsarana ambony ny governemanta.
Tany am-piandohan'ity taona ity tamin'ny volana febroary, ny nosy akaiky an'i Bermudes dia nanjary firenena voalohany manerantany namadika lalàna iray mamela ny fanambadian'ny samy lahy na samy vavy. Matahotra ireo mpikatroka LGBT fa hametraka ohatra mialoha ho an'ny zon'ny pelaka sy hiverenan'ny faritra lavitra any amin'ny faritra.
Ny seranam-piaramanidina LHR dia manana fiaramanidina mpitondra fiara mpitondra herinaratra lehibe indrindra any UK
Tokony handeha ho any amin'ny Nosy Lehibe Hawaii ve ianao?